Izindaba - Enterprise Honor
I-Yantai Haicheng Sanitary Products Co., Ltd.yibhizinisi elithembekile elineziqu eziphelele nezihlonipho eziningi. Le nkampani sekuneminyaka engaphezu kwengu-17 isathuthuka futhi ibibambisene kakhulu nezinkampani eziningi. Kukhona nokuhwebelana okuningi nezinhlangano ezinkulu zebhizinisi. Ekushintshaneni, siyaqhubeka nokufunda kuzici ezinhle zabanye, sithathe ingqikithi futhi silahle amanyela, futhi siqhubekele phambili ngenkuthalo, ngaleyo ndlela sidlala indima enhle kakhulu ekuthuthukiseni ikusasa lenkampani yethu.
Engqungqutheleni Yokuncoma Ubuhlakani Bebhizinisi Ye-Integrity Promotion Association yango-2016, wanikezwa “Ilungu le-Yantai Enterprise Integrity Promotion Association”. Ukukhethwa kwezilinganiso zale ngqungquthela yokuncoma umcimbi kuhlukaniswe izingxenye ezintathu: ukuphakanyiswa komphakathi, ukuvota okuthandwayo, ukuvota ngokuhlanganyela phakathi kwamabhizinisi, umcimbi ulungile futhi uvulekile, futhi ngokukhethwa nokukhethwa kwezendlalelo, isabelo ekugcineni siyasungulwa. Ukuhlonishwa okutholwe ngalesi sikhathi akukhona nje ukuqashelwa kwenkampani yethu kuphela, kodwa futhi nokulindelwe kithina, ngethemba lokuthi singenza kangcono ngokuzayo. Futhi unikezwe iziqu eziningi zokuhlonishwa nguhulumeni wasekhaya njengosomabhizinisi abavelele, amabhizinisi athembekile, igumbi elihle kakhulu lamalungu ezinkampani zezohwebo, kanye negumbi elithembekile lamalungu ezinkampani zezohwebo. Amanye amazwe nezifunda esizithumele kwamanye amazwe nazo ziyaneliseka kakhulu ngemikhiqizo yethu. Lokhu futhi kungumphumela wemizamo yenkampani yethu yokuyithuthukisa.
Ngesikhathi ubhadane lwango-2020, bonke abasebenzi benkampani benze imizamo ebumbene. Ngaphansi kobuholi bemenenja jikelele, basebenza isikhathi esengeziwe nsuku zonke ukwenza amagciwane nemikhiqizo yenhlanzeko, kufaka phakathiutshwala busula, ukusula amagciwane, buso bezokwelapha, izingubo zokuvikela neminye imikhiqizo yokuvikela indle. Ngesikhathi ubhadane, lwadlala indima ebalulekile futhi lwahlinzeka ngesiqinisekiso sokuphepha kwabantu, ukuvimbela ubhadane nokuhamba. Ngaphezu kwalokho, sisathuthukisa ngentshiseko imikhiqizo emisha futhi siqhubeka nokucwaninga ngempilo yabantu enempilo.